Katalọgụ ọrụ IT | Motadata
ServiceOps IT katalọgụ
Gbanwee ụzọ ị na-enye ọrụ
Meziwanye nnyefe ọrụ IT gị site na katalọgụ Ọrụ IT nke dabara na ITIL ọhụrụ na onye ọrụ.
Ejigharịa ahụmịhe ndị ahịa Katalọgụ ọrụ
Ngwá ọrụ ServiceOps ITSM na-abịa na katalọgụ ọrụ na-enye ndị otu dị iche iche ike na ntinye mgbanwe dijitalụ ha. Ọ na-eme ka usoro nke ịnye ngwaahịa na ọrụ dị mfe site na ntinye aka ụdị e-azụmahịa ma kpochapụ Silos, na-eweta nghọta karịa, na ịkwalite ahụmịhe ndị ahịa site na ọrụ onwe.
Mee a Ụlọ ọrụ dijitalụ
Nabata mgbanwe dijitalụ wee malite ọrụ dịgasị iche iche n'ofe nzukọ a maka imekọ ihe ọnụ ka mma na ngwa ngwa site na njikwa ọrụ ọgbọ na-abịa.
Jiri ndebiri ọrụ arụgoro 100+ maka ọrụ IT na ndị na-abụghị IT
Chepụta ọrụ ngwụcha ruo ọgwụgwụ site na iji ọkachamara ịdọrọ na dobe
Otu ikpo okwu jikọtara ọnụ maka IT, HR, Facility, Marketing, wdg.
Soro SLA ka iwelie arụmọrụ nke nnyefe ọrụ gị
Nnyefe ọrụ ọsọ ọsọ
Ebe ọ bụla, oge ọ bụla - Ọdịnihu nke nkwurịta okwu na Ọrụ onwe nke ọtụtụ ọwa
Kwanye ndị ọrụ gị ike site na ịnye ọrụ n'oge ọ bụla ebe ọ bụla site na ọtụtụ ọwa nkwukọrịta dị ka ọnụ ụzọ ọrụ nke dabere na webụ, ngwa ekwentị, chatbot, email, SMS, oku, wdg.
Jiri ọnụ ụzọ ọrụ onwe onye nwere ọgụgụ isi kwalite nrụpụta
Nye onye ọrụ ohere ịnweta ntọala ọmụma ziri ezi na ọkwa ọ bụla
Bipụta ọkwa n'ụzọ dị mfe
Ọrụ onwe nke asụsụ dị iche iche maka ahụmịhe enweghị nkebi gafee mpaghara geo-iche dị iche iche
Enyemaka anaghị akwụsị akwụsị site na mebere onye nnọchi anya na chatbot
Nnweta na arụmọrụ emelitere
Emelitere afọ ojuju ndị ahịa/ahụmịhe onye ọrụ
Jiri nlezianya nyochaa ohere na-adịghị agwụ agwụ Ngwa ngwa akpaaka
Jikwaa arịrịọ ọrụ niile nke ọma ma kwalite nnyefe ọrụ IT site na iji arụ ọrụ arụ ọrụ siri ike.
Njikere iji ndebiri akpaaka arụgoro 100+
Mee ka ọrụ azụmaahịa gafee ngwụcha ruo ngwụcha
Weta uru n'azụmahịa ahụ site na iji ihe owuwu dabere na bot
Jiri injin akpaaka na-arụ ọrụ na-adịghị emetụ aka kwalite nrụpụta
Arịrịọ ọrụ ụzọ n'aka ndị otu aka nri nwere ike nke ọrụ akpaghị aka dabere na AI
Jiri were were were were were were were were were were were were were wepụta oche ọrụ gị Mobile App
Ndị na-ahụ maka ọrụ nwere ike itinye aka na arịrịọ ọrụ sitere na ngwaọrụ mkpanaka ma mee ihe niile dị mkpa achọrọ iji wepụta ọrụ ekwere na ya.
Ụzọ ụzọ atọ iji nye njikwa kacha mma nye onye na-arịọ arịrịọ, onye na-akwado ya na onye ọrụ nka
Jikwaa arịrịọ IT niile na ndị na-abụghị IT sitere na interface nwere nghọta
Welite oge na akụrụngwa site na nkwado na-aga
Mee ka ndị ọrụ gị nwee ntụkwasị obi n'onwe ya site na ntọala ọmụma na ngwa mkpanaka
Ebumnuche maka afọ ojuju ndị ahịa 100% site n'inye ahụmịhe onye ọrụ e-azụmahịa-dị ka wepụta ọrụ niile dị site na katalọgụ ọrụ IT anyị.
Katalọgụ Ọrụ Azụmahịa
Ọrụ ngosi nke ndị ọrụ njedebe ga-arịọ maka dị ka arịrịọ maka ịnweta, onye ọrụ ịbanye, wdg.
Katalọgụ ọrụ nka nka
Ọrụ dị ugbu a dị ka oke AWS nke ndị otu IT na-akwado ga-arịọ.
Jiri ngwa ngwa chọọ ọrụ enyere site na iji nzacha ahaziri ahazi na nke akọwapụtara nke ọma nke ogwe ọchụchọ dị elu.
Jikwaa arịrịọ ọrụ mbata usoro okirikiri ndụ
Gịnị bụ arịrịọ ọrụ? Kedu ụdị arịrịọ ọrụ dị iche iche?
Katalọgụ ọrụ bụ nchekwa data mebere nke nwere ozi kachasị ọhụrụ na onyinye ọrụ IT na-arụ ọrụ. Arịrịọ ọrụ bụ arịrịọ onye ọrụ njedebe mere na tebụl ọrụ IT iji malite ọrụ ọrụ. A na-ahazi arịrịọ ọrụ site na iji ọkọlọtọ, usoro arụrụ arụ ọrụ eburula ụzọ wepụta ọrụ n'ime ọkwa ọrụ ekwekọrịtara.
Enwere ụdị arịrịọ ọrụ dị iche iche, gụnyere, mana ọnweghị oke na, arịrịọ maka ozi dịka ọmụmaatụ, ozi gbasara iwu ezumike, arịrịọ maka ịnweta dịka ọmụmaatụ, ịnweta otu akwụkwọ, na arịrịọ maka ịnye akụrụngwa dịka, arịrịọ maka ekwentị ọhụrụ, laptọọpụ. , ma ọ bụ software.
Kedu uru dị na iji katalọgụ ọrụ?
Iji katalọgụ ọrụ gosi ndị ọrụ ọrụ niile nwere ike inye ọtụtụ uru na nzukọ. Katalọgụ ọrụ na-enyere aka ịkwalite ọrụ onwe n'etiti ndị ọrụ si otú a na-ebelata ọnụ ahịa njikwa yana melite ahụmịhe onye ọrụ site na ịnye ozi zuru ezu gbasara arịrịọ ha na ọkwa nke arịrịọ ha.
Katalọgụ ọrụ na-arụ ọrụ dị ka ebe etiti ịnweta ngwaahịa na ọrụ IT ma ọ bụ ngalaba ndị ọzọ na-enye, si otú a na-enye njikwa etiti arịrịọ niile. Ọ na-enye njikwa karịa n'ihe gbasara ikpebi onye nwere ike ịnweta ọrụ ndị dabere na ọrụ na ọrụ ha. Katalọgụ ọrụ na-enyere aka ịhazi ọkwa nke nnyefe ọrụ site na ịnye nkọwa doro anya nke ihe onye ọrụ nwere ike ịtụ anya n'ihe ọrụ ọ bụla.
Ezigbo katalọgụ ọrụ na-ebelata oge ọ na-ewe maka onye ọrụ iji nweta ma rịọ ọrụ, na-enye ohere ijikwa ya nke ọma. N'ikpeazụ, ọ na-eme ka uru azụmahịa dịkwuo mma site na ịhazi ọrụ IT nke ọma na atụmatụ azụmahịa nke nzukọ.
Kedu ụdị katalọgụ ọrụ dị iche iche?
Enwere ụdị katalọgụ ọrụ abụọ dabere na echiche ha - Azụmahịa ma ọ bụ katalọgụ ọrụ ndị ahịa na nka nka ma ọ bụ nkwado ọrụ.
Katalọgụ azụmaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ahịa na-enye ozi na ọrụ IT niile dị nke enyere ndị ahịa. IT na-enye ohere ịnweta katalọgụ ọrụ na ngalaba azụmahịa dị iche iche na usoro azụmahịa ha na-akwado.
Katalọgụ ọrụ nka ma ọ bụ nkwado na-enye ozi na ọrụ nkwado IT enyere. Ejikọtara katalọgụ a na ọrụ ndị ahịa na-eche ihu na ihe nhazi, yana ọrụ nkwado ndị ọzọ dị mkpa iji rụọ ọrụ ahụ.
Kedu ebumnuche njikwa katalọgụ ọrụ?
Ebumnuche nke njikwa katalọgụ ọrụ bụ inye na idowe otu isi ihe ọmụma ziri ezi gbasara ọrụ niile na-arụ ọrụ. Njikwa katalọgụ ọrụ na-ekwe nkwa na katalọgụ ọrụ dị maka ndị nwere ike ịnweta ya.
Ebumnuche nke njikwa katalọgụ ọrụ bụ ijikwa ozi dị n'ime katalọgụ ọrụ yana iji hụ na ozi ahụ ziri ezi ma gosipụta nkọwa ugbu a, ọkwa, oghere, na ndabere nke ọrụ niile dị. Ọzọkwa, njikwa katalọgụ ọrụ na-ahụ na e mere katalọgụ ọrụ ahụ maka ndị ọrụ enyere ikike n'ụzọ na-eme ka ojiji ha dị mma na nke ọma nke ozi ahụ ma kwado mkpa ha na-agbanwe.